Hanampy ireo kaominina miisa 28 manodidina ny CUA | NewsMada
Hanampy ireo kaominina miisa 28 manodidina ny CUA
Nisokatra ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny kaominina manodidina, miisa 28. Nisy ny fifanaraham-piaraha-miasa vita sonia teo amin’izy ireo amin’ny fanampian’ny CUA amin’ny famonjena voina eny amin’ny kaominina manodidina, tetsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, ny 20 mey teo.
Nambaran’ny lehiben’ny mpamonjy voina, ny « chef de corps sapeurs-pompiers », Razafimanahaka Tiana fa tafiditra amin’ny fanamorana sy ny fisitrahan’ny rehetra amin’ny fizakana voina ary fizakana ny fandaniana izany ka hiantoka ny fitaovana sy ny fikajiana ny olona miditra an-tsehatra amin’ny asa vonjy voina ny CUA. « Anjaran’ny kaominina manodidina kosa mandray anjara amin’ny fandaniana arakaraka ny trano may misy eny aminy », hoy izy.
Nifanakalo hevitra tamin’izy ireo ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohana Naina momba ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fanohizana ny fiaraha-miasa.
Hanampy amin’ny fomba fampidiran-ketra ny CUA
Nampanantena ny tenany fa hanampy ireo kaominina amin’ny fikirakirana ny fampidiran-ketra, amin’ny alalan’ny rindram-baiko « logicielle » ho amin’ny « sécurisation recette fiscale » eo amin’ny fanisana trano sy ny mpivarotra. Ny taxi sy ny sarety rehefa vita ny fandaminana izany ho an’ny aty amin’ny CUA. Nisy koa ny fifanarahan’ireo ben’ny tanàna amin’ny fanaovana taratasy fangatahana fanampiana « subvention » azy ireo, halefa eny amin’ny ministeran’ny Vola. Hanome arotava sy fanafody « désinfectant » ho an’ireo kaominina manodidina koa ny ben’ny tanàna an’Antananarivo Renivohitra, araka ny fahafahany, manao izany.
Nohararaotina ny fihaonana nifampiresahana amin’ny Jirama, momba ny olana ifotony eny amin’ny kaominina. Nambaran’ny avy ao amin’ny Jirama fa ho jerena ny laharam-pahamehana, azo tanterahina haingana. « Hodinihina ny fangatahana manaraka avy eo », hoy izy ireo .